Cudurka Karoonaha oo loo helay dawo qiimeheedu jaban yahay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Cudurka Karoonaha oo loo helay dawo qiimeheedu jaban yahay
Cudurka Karoonaha oo loo helay dawo qiimeheedu jaban yahay
(Hadalsame) 17 Juun 2020 – Dawo qiimaheedu jaban yahay, caalamka oo dhanna laga heli karo, ayaa la sheegay inay gacan ka geysan karto badbaadinta bukaannada sida daran ula xanuunsan cudurka corona, sida ay faafisay BBC.
Dawadan – oo xaddiga laga qaadanayo uu yar yahay – ayaa lagu magacaabaa dexamethasone, waxaana loo arkaa inay tahay guul aad u weyn oo laga gaaray dagaalka lagula jiro fayraska dilaaga ah, sida ay sheegeen khubarada caafimaadka ee UK.
Waxay dawadan la helay qeyb ka tahay tijaabadii ugu weyneyd ee caalamka looga sameeyay dawooyinka horay u jiray, si loo arko inay wax ka qabanayaan fayraska corona.
Waxay seynisyahannada caafimaadka sheegeen inay si buuxda u caawin karto afar meelood saddex meel oo ka mid ah bukaannada xaaladahooda laga quustay ee ku neefsanaya qalabka loo yaqaanno ventilators-ka.
Waxay sidoo kale sheegeen inay cudurka ka dili karto inta badan dadka uu ugu dhacay sida adag.
Cilmi-baareyaasha ayaa sheegay in haddii dawadan la isticmaali lahaa markii ugu horreysay ee uu fayraska gaaray UK ay badbaadin kari lahayd nolosha dad gaaraya 5,000 oo hadda geeriyooday.
Dalalka saboolka ah ee dunida, oo cudurka Covid-19 uu aad u saameeyay ayey faa’iidada ugu weyn u noqon doontaa, maadaama uu kharashkeedu aad u yaryahay.
Qiyaastii 19 ka mid ah 20-kii bukaan ee uu ku dhaco fayraska corona waxay ka caafimaadaan iyagoo aan isbitaal la dhigin.
Xitaa kuwa isbitaalka la dhigo badankood way kasoo kabsadaan cudurka, balse qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in lagu xiro qalab neefsashada ka caawiya.
Kuwaas ayaa ah bukaannada halista weyn ugu jira inay u geeriyoodaan cudurka.
Waxaase la aaminsan yahay inay si fiican u caawin karto dawada dexamethasone.
Horay ayaa dawadan loogu adeegsaday xanuunno kale oo waxyeello u geysta jirka, waxayna u muuqataa mid joojin karta dhaawaca soo gaara jirka gudihiisa, marka ay si xad dhaaf ah falcelin u sameeyaan unugyada difaaca qofka ee ka hortagaya saameynta coronavirus, kuwaasoo ugu dambeyn shaqadooda jahwareerka ah ku sababi kara dhimasho.
Tijaabada lagu sameynayay dawadan, oo ay hor kacayeen koox khubaro ah oo ka socota jaamacadda Oxford, ayaa lagu sameeyay ku dhawaad 2,000 oo bukaannada isbitaallada ah, kuwaasoo la siiyay dawada dexamethasone, waxaana la barbar dhigayay in ka badan 4,000 oo bukaan oo aan la siinin dawada.
Bukaannada uu ku xiran yahay qalabka neefsashada caawiya ee ventilators-ka waxay ka caawisay inay khatarta dhimashada ka yareyso 40%. Dadka qalabka neefta Oxygen-ta lagu caawiyana waxay khatarta dhimashada ka yareysay 25% ilaa 20%.
Barfasoor Peter Horby, oo ah madaxa kooxda baaritaanka wadday, ayaa yiri: “Tani waa dawada kaliya ee ilaa hadda la xaqiijiyay inay yareyn karto heerka dhimashada – si baaxad leh ayeyna hoos ugu dhigeysaa. Waa guul weyn oo la gaaray.”
Dawada dexamethasone waxaa tan iyo sanadihii 1960-meeyadii loo isticmaali jiray cudurro ay ka mid tahay neefta, waxaana aad loogu ammaanay waxtarkeeda.
Previous articleDHEGEYSO: Marwo Adna Aadan oo sheegtay arrin aan taariikhda raad ku lahayn (Arag caddaynta)
Next articleJabuuti oo maanta ogaanaysa inta uu la egyahay CULAYSKA diblomaasiyadeed ee ay caalamka ku leedahay